एसइइ नतिजा र अन्टसन्ट बुझाई - AahaSanchar
Home आहा बिचार एसइइ नतिजा र अन्टसन्ट बुझाई
एसइइ नतिजा र अन्टसन्ट बुझाई
एकजना साथी थिए । समकालीन नेपाली साहित्यका मध्यमस्तरीय विद्वान । लाटा देशका गाँडा तन्नेरी । नेपाल न हो । अली अचाक्ली मस्तै विद्वान त नेपालमा को ठहर्छ र ! एक कार्यक्रममा पुर्व प्रम बाबुराम भट्टराइले भनेको याद आउंछ अमेरिकाको कुनै राज्यमा मात्र नेपालका २७ सय जति इन्जिनियरहरु छन् । भनेपछि यो देशमा को छ र अलिकति क्षमता भएको मान्छे । सबै उतै हुर्रिएका छन् । उतै कुदेका छन् । कुद्न बाँकी पनि कुद्ने तरखरमै छन् । ठूलठूलो महत्वाकांक्षा बोकेकाहरु बसुन पनि किन यता । पुजीवादी दुनिया । सबै कुराको मापन रुपैया र पैसामा । अनि यता ४।५ बर्षमा हुने कमाइ कजाइ ताल परे उतातिर एक महिनामै । अनि कुद्ने नै भए उतै । यो देशमा बाँकी रहेलपहेलबाट छानछुन पार्दा त अलीअली टाइफाइ गर्नेवित्तिकै विज्ञ त भइ नै हाल्यो । तिनै मध्येका एक जना साथी । समकालीन साहित्यका मध्यमस्तरीय विद्वान ।
‘जाम आज त नाचघर नाटक हेर्न जमलतिर ।’ साथीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कुरै भएन । फ्रान्सेली नाट्य महोत्सव त्यस्तै के रहेछ अवसर । साँझको बेला थियो । ट्याइटुइ ट्याइटुइ के हो के हो । केही बुझिएन सबै उतैको भाषामा । मलाई कतिखेर जाउं कतिखेर जाउं लागिरहेको थियो । लगभग साठे सात बज्यो । साथी आसनग्रहणबाट टसमस उठ्दैन । ‘जाम अब आठ बजेको लाष्ट गाडी पनि छुट्छ ।’ झक्झक्याए पछि बल्ल साथी तङ्गरीयो । ‘कस्तो राम्रो नाटक रैछ । अहो म त दङ्गै परेँ । कथावस्तु¸ अभिनय, नाट्यकृति, शीर्षक, उद्देश्य, पात्र, संवाद, भाषाशैली, द्वन्द्व, परिवेश, सामग्री, भेषभुषा, संगीत, रङ्गमञ्च, प्रकाश आदि सबका सब उत्कृष्ठ’ रैछन भन्दै साथी त नाटकको के के न हो के के तारिफमै उत्रिन थाल्यो ।
वरीपरी दर्शकको घुइचो । साथी जोशिएको छ । धौ धौ बाहिर निकालीयो । ‘क्या हो यस्तो । अचम्मै गर्नु भो त आज त । अंग्रेजी फुट्टु नआउने मान्छे आज त अंग्रेजी नाटकको सार नै खिच्नु भो त ।’ ‘मैले त केही पनि बुझेन । अम्रिकान गोरीका सेता पिडौला मात्रै !’ साथीले जमलको पुलपारी दरवार स्कुल नजिक पुगेर भन्छ । ‘काँ बुझ्नु मैले पनि । क्या हो क्या हो । त्याँ त अरुका सामु बुझेको अभिनय गरेको पो त !’ मान्नुपर्छ साथीको नाटकलाई पनि । नाटक हेर्न गएको मान्छे नाटकै गर्यो ।
हरेकसाल कक्षा १० को एसइइ नतिजाको बेला तरङ्गित हुने शिक्षा समुदाय यसपटक पनि तरङ्गित भयो । यसपटक पनि शैक्षिक गुणस्तर खस्किएका चर्चा भए । शैक्षिक गुणस्तरको कुरा गर्दा शिक्षा आफैमा गुणस्तरीय हो । यसलाई अगुणस्तरीय वा गुणस्तरहीन भन्नै मिल्दैन भन्नेहरु पनि छन् । ‘चिया खाम’ भनेपछि स्वत: तातो चिया नै हो । ‘तातो चिया खाउं’ भनिदैन । त्यसैले शिक्षा गुणस्तरीय छैन भने त्यो शिक्षा नै होइन भन्नेहरु पनि छन् ।
अनि खस्केको कुरा गर्दा कहिले माथि थियो र अहिले खस्क्यो भन्नेहरु पनि छन । यस सम्बन्धमा फेरि उनै बाबुरामले केही दिन अघि भनेको कुरा याद आउंछ । ‘शाह र राणाकालीन भन्दा पहिलेको नेपाल विश्वका २५ विकसित देशमध्ये १७।१८ नम्वरमा पर्थ्यो ।’ शिक्षा पनि पहिले उहिले औपचारिक नभए पनि व्यावसायिक¸ जीवनपयोगी¸ अनौपचारिक थियो होला । त्यही भएर होला उहिले राम्रो थ्यो । अहिले खस्क्यो भन्ने कुरा । हरेक साल १९९० सालदेखि नै सबैले बुझिनेगरी यति उति प्रतिशत कुन कुन डिभिजनमा को पास को फेल भन्दै एसएलसीको नतिजा विश्लेषण हुन्थ्यो । एसएलसी नतिजालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको मानकझैँ प्रचार गरिन्थ्यो । प्रतिशत र अङ्ककै आधारमा पुरस्कार¸ सम्मान र सजायहरु हुन्थे । आज भोलिको बहस अली नबुझिने खालको छ । माथी पहिलो अनुच्छेदमा वर्णित अंग्रेजी नाटकजस्तो । नेपालमा बाँकी रहेकामध्ये कोही धेरै बुझेका पनि होलान । त्यो अली अपवाद र अलग्गै पाटो होला । तर समष्टिगत रुपमा बुझ्दा अहिलेको बहस अली आधुनिक र म्याथमेटिक पोइन्ट अफ भ्युबाट हुने भएकोले सर्वसाधारण अभिभावकको चासो¸ बुझाइ र बहसमा सक्रिय सरिकपन देखिदैन ।
कोहीले माथिकैजस्तो बुझेको अभिनय गरेको भए वेग्लै कुरा नत्र यो जिपिएले झन रनभुन्ल पारेको छ । यसले नतिजालाई निश्चित पोइन्टमा नभइ प्राप्ताङ्कको वर्गान्तर बनाइ त्यसलाई पनि ग्रेडमा रुपान्तर गरी अनि त्यसलाई फेरि ग्रेड पोइन्ट एभरेजमा अदलबदल पार्ने भएकोले विद्यार्थी र अभिभावकवीचको बुझाइलाई समेत यसले थप गोलमटोल र गन्जागोल पारेको छ । आफ्ना छोराछोरीले के के परिणाम हात पारे भन्ने सवाल सर्वसाधारण अभिभावकको लागि दुरुह भएको छ ।
तैपनी प्राप्ताङ्को बर्गान्तर¸ ग्रेड¸ ब्याख्या¸ स्तरीकृत अङ्क¸ ब्याख्याको विस्तृतीकरणलाई एकछिन थाँती राख्दै माथिको नाट्य दृष्टान्तझैँ बुझेको अभिनय साथ विद्यालयहरुको नतिजालाई विश्लेषण गर्दा हामीले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसक्नुका कारणहरु पुर्ववत् रुपमा पहिचान भएकै छन् । जसको निराकरण हामीले अध्यापि गर्न सकिरहेका छैनौ । बरु झन् बढिरहेका छन् । जस्तो शिक्षकले जोश¸ जाँगर सहित उपयुक्त विधि प्रयोग गरेर राम्रोसंग सहजीकरण गरिरहेका छैनन । अहिले पनि कैयन विद्यालयमा पाठ्यक्रम¸ शिक्षक निर्देशिका¸ विषयगत सिकाइ उपलब्धी¸ तहगत सक्षमतालाई शीर्ष स्थानमा राखेर पठनपाठन गर्ने प्रचलन छैन । कुन सिकाइ उपलब्धी कुन पाठबाट प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको हो सो को कुनै पुर्व योजना र अन्तरसम्बन्ध कायम नगरी अन्धाधुन्ध विना तयारी पठनपाठन भइरहेको छ । शिक्षणमा हुनै पर्ने ३ पक्ष योजना¸ शिक्षण र सुधारमध्ये तीनैको तालमेल छैन । पढ्ने पढाउनेको उद्धेश्य विना परीक्षाको प्राप्ताङ्कलाई लक्ष्य बनाएर पठनपाठन भइरहेको छ ।
उत्तर आधुनिक विद्यार्थीहरुमा फेसबुक¸ फोन र ‘अरु अरु’ तिर केन्द्रित भएर पढाइप्रति एकरत्ति पनि चासो¸ जिज्ञासा र सक्रियता छैन । नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी मोबाइल एप्सबाट चिट चोर्ने चोराउने भएपछि पढ्नु पनि किन पर्यो र ! विद्यार्थीहरुमा पढ्ने भनेको त अभिभावक¸ शिक्षक र प्रधानाध्यापकको लागि हो भन्ने एकहोरो बुझाइ छ । हामी हाम्रै लागि पढ्दै छौँ भन्ने विद्यार्थीहरुको संख्या थोरै छ र त्यो पनि घट्दै गइरहेको छ । जसको लागि लगानी छ त्यही पक्ष नै निस्क्रिय भएपछि विद्यार्थी संगसंगै शिक्षक झुङ्ग्नु पनि अनौठो रहेन । कुनै पनि ठाउंमा कुनै पनि मान्छे पुग्नको लागि निश्चित उद्धेश्य हुन्छ । विना उद्धेश्य कोही पनि कहिँ पुग्न सम्भव छैन । तर विद्यार्थी नै यस्तो भइदियो । जो दशकौँदेखि विद्यालय धाइरहेको छ । तर उ स्वयम् विद्यालय जानुको अर्थ खोज्दैन । उद्धेश्य खोज्दैन । १०।१० बर्षसम्म लगातार विद्यालय पुगेर हासिल गर्ने लक्ष्यबारे उ स्वयम बेखबर छ ।
सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षालाई सैद्धान्तिक रुपमा प्राथमिकतामा राखेको प्रतिवद्धता त गरे तर व्यवहारमा देखिएन । संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको लगानीको मात्राबाट त्यो प्रष्ट देखन्छ । उनै बाबुराम भट्टराइ अर्थमन्त्री र प्रचन्ड प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षामा गरिएको सबैभन्दा धेरै लगानी क्रमश घट्दो क्रममा छ । शिक्षक कर्मचारी तलबमा हुने खर्चलाई सरकारहरुले शैक्षिक लगानी भनिरहेका छन् । कोही त शिक्षामा गरेको लगानी डोजरले बाटो खनेझैँ तत्काल देखिदैन त्यसैले ५ बर्षे अवधिमा शिक्षामा किन लगानी गर्ने भन्ने सोचाइका पनि छन् । अनुगमनकारी निकायहरु नाम मात्रका प्राणविहीन अस्थिपन्जर सावित भए । स्थानीय सरकार शिक्षाको क्षेत्रमा पात नभएको ठ्याङ्ग्रो मात्र भयो । अभिभावकहरुका आफ्नै गुनासा । हामीले त वच्चावच्ची विद्यालय पठाइसक्यौँ । हाम्रो काम त्यत्ति हो । पढाउने नपढाउने सबै जिम्मा शिक्षककै भरमा ! घरमा पढ्ने त कता हो कता विद्यालयमै दिनभरी पढेको कुरा समेत घरमा १।२ लाइन लेख्ने र १५।२० मिनेट सम्झिने समेत अवस्था छैन विद्यार्थीहरुमा ।
समुदाय शिक्षालयबाट अलग भएको धेरै भइसक्यो । आफुलाई पर्दा विद्यालयमा जम्मा हुने । नत्र त्यतातिर देखा नपर्ने । देखा परे पनि विद्यालयको भौतिक वातावरण¸ भवन¸ ट्वाइलेट¸ घेराबार¸ खानेपानीको योजना झार्ने कुरामै केन्द्रित । विद्यालयको पठनपाठनबारे न विव्यसमा छलफल हुन्छ न अभिभावक भेलामा । समग्र भौतिक वातावरण विद्यार्थीको पठनपाठनको लागि हो । केन्द्रभागमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धीलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गाइगुइमै सीमित । कुनै बेला उत्तीर्ण अनुत्तीर्णको भय वा शंशयको कारण समेत विद्यार्थी मरीमेटी पढ्ने अवस्था थियो । अब तल्ला कक्षाहरुमा निरन्तर विद्यार्थी मुल्याङ्कनले फेल¸ पास भन्नै नमिल्ने । तल्लो कक्षामा रोक्नै नमिल्ने । जतिसुकै कमजोर भएपनि उपल्लो क्लास उकाल्नै पर्ने । हुन त तल्लो कक्षामा हासिल नभएका सिकाइ उपलब्धी माथिल्लो कक्षामा प्राप्त हुनेगरी उदार कक्षोन्नतीको नीति ल्याइयो । तर स्वत: कक्षोन्नतीमा रुपान्तर भयो । कसले हेर्ने कुन विद्यार्थीको कुन विषयमा कुन कक्षामा कति सिकाइ उपलब्धी हासिल हुन बाँकी छन भनेर !
माथिल्लो कक्षामा अक्षराङ्कन भइहाल्यो । अक्षराङ्कन भनेपछि के हो के हो ! झिलीमिली झिल्ला ! छानाभरी घिरौला के के दिन्छन हेरौँला । के के हो के के ! यति जिपिए¸ उति जिपिए¸ न नीति निर्माताले बुझे¸ न शिक्षकले¸ न बिद्यार्थीले¸ न कर्मचारी र सरोकारवाला ले नै ! कहिले छ वटा ग्रेड भनेको छ¸ कहिल्यै नौ वटा भनेको छ । ए मात्रै होइन ए प्लस पनि भनेको छ । नौ वटा ग्रेडै बनाउनुथ्यो भने सरासर ए देखि आइ सम्म लेखेनि हुने ! ए प्लस¸ बी प्लस¸ सी प्लस¸ डी प्लस भन्ने अल्फाबेट त कतै शब्दकोषमै भेटिदैन । तिनले बनाएको अक्षराङ्कन निर्देशिकाको ब्याख्या र ब्याख्याको बिस्तृतीकरण त सबैले हेर्दैनन ।
ग्रेडलाई प्रतिशतमा लिन पाइन्न भनेको छ । अक्षर र अङ्क त संगै हुदै हुन्न भनेको छ । अनि अङ्कैबाट अक्षरमा रुपान्तर गरेको छ । अक्षराङ्कन भनेको छ । एकछिन मानिलउ फेरि ग्रेड पोइन्ट एभरेज अङ्कमै भनेको छ । अक्षराङ्कन भनेपछि अङ्क किन प्रयोग ! ग्रेडाङ्कन भनेपनि हुने हो । अक्षराङ्कनको सिधा अर्थ त अक्षरमा अङ्कन हो । लाटो नेपाली भाषामा । यता कक्षा ९ र १० को सट्टा ग्रेड नौ र दश भनेपनि हुने हो ! कि ए¸ बि¸ सी मात्रै बनाए पनि हुने । उत्तम¸ मध्यम¸ सामान्य बनाए पनि हुने । प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिकको ग्रेड जोडेर जम्मा ग्रेड निकालेको छ । ग्रेड पोइन्ट जोडेर ग्रेड पोइन्ट एभरेज निकालेको छ तर त्यो ग्रेड पोइन्ट एभरेजबाट एभरेज ग्रेड त निकाल्नै पाइन्न भनेको छ । औपचारिक प्रमाणपत्रमा नलेख्ने कुरा एउटा होला जुन विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन कार्यविधि २०७२ मा समेत ग्रेड सिटमा उत्तीर्ण अनुतीर्णको सट्टा विषयगत ग्रेड र समग्रमा स्तरीकृत ग्रेड दिइने कुरा लेखिएकै छ । हाल कक्षा ८ को ग्रेड सिट समेत सोही अनुसार भएकै छन् तर शिक्षक¸ विद्यार्थी र अभिभावकको सहजताका लागि कसैले एभरेज ग्रेड निकालेर ब्याख्या गर्दैमा बिग्रने त केही थिएन ।
विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित र उत्प्रेरित हुनेगरी जनसाधारणले बुझ्ने भाषामा आफ्नो नतिजा सम्प्रेषण हुन नसक्नु पनि उदेकलाग्दो नै भयो । सरोकार राख्नेहरुलाई गोलमटोल पारेर केही गनितज्ञ र तथ्याङ्कका जानकारलाई मात्रै जानकारी हुने नतिजा अभिव्यक्तिको पाटोले पनि शिक्षालाई झन अज्ञेय र अन्टसन्ट बनाएको छ । अनि फेरि पनि उस्तै छ हामी सबैको बुझाइ उही माथिको अंग्रेजी नाटकजस्तै ।
Previous articleराष्ट्रपति रनिङ शिल्डको सभामुख घर्तीद्धारा उद्धघाटन
Next articleलद्यु उद्यम बजारीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया
रुकुम पश्चिम देखि पुर्ब सम्म मध्यपहाडी लोकमार्गको मनोरम दृश्यहरु, फोटो फिचर
aahasanchar - June 19, 2017
मुसिकोटमा हुदैछ ठाडि,टप्पा, सोरठि र सिंगारु गीत प्रतियागीता
aahasanchar - January 26, 2018
रुकुम पूर्वका विभिन्न स्थानमा हिमपात (फोटो फिचर)
aahasanchar - January 27, 2019
आहा सञ्चार साप्ताहिक रुकुम बर्ष ६, अंक ४१, बैशाख १८ २०७६
aahasanchar - May 1, 2019